Author: admin Published Date: March 22, 2020 Leave a Comment on DASTUURKA PUNTLAND 2012 PDF
Eedaysanaha laguma hayn karo meel aan qaanuunku bannayn. Xoghayaha Maxkamadda sare ayaa noqonayaa Xoghayaha Maxkamadda Dastuuriga.
Qofku waxa uu fikraddiisa ku cabbiri dastuurla qaab hadal, saxaafadeed, qoraal, muuqaal, suugaan iyo habab kale oo sharciga iyo anshaxa waafaqsan. Ma jiri karo qof, koox ama qayb ka mid ah bulshada oo awoodda dawladnimo u adeegsan karta si gaar ahaaneed. Difaacaha Xuquuqda Aadanuhu wuxuu leeyahay awood xilgudasho oo heer Puntland ah. Saxaafadda iyo warbaahinta xorta ahi waa ay ka madaxbannaan yihiin faragelin dawladeed, waxayna u hoggaansamayaan sharciga oo keliya.
Xeer gaar ah ayaa nidaamin doona ilaalinta deegaanka. Qof kasta wuxuu xaq u leeyahay in uu aasaaso, ka mid noqdo ama ka qayb qaato hawlaha ururada dhaqan-dhaqaale, bulsho, Isboorti iyo cilmi, haddaan sharci ka reebin.
Golaha Wakiillada waxaa la kala diri karaa markii: Shaqaaluhu waxa ay xaq u leeyihiin in ay cabashadooda ku muujiyaan bannaanbax ama shaqo-joojin si xeerka waafaqsan. Haddii uu sharci ku jiro gacanta Madaxweynaha muddo soddon 30 beri ka badan, iyada oo aan la faafin, hogaanka Goluhu wuxuu amrayaa in lagu soo saaro warbaahinta qoraalka ah ee dalka. Sharci gaar ah ayaa lagu maamulayaa habraacyada shaqa qorista, kala astaynta jagooyinka, dallacaadaha, tababarka, ruqsayanta, xuquuqda iyo dhammaan arrimaha kale oo ku saabsan shaqaalaha Dawladda.
Dawladdu waxay ogoshahay furasho xarumo caafimaad, iyadoo ay takhaatiirtuna xirfaddooda ku shaqeysan karaan. Haddii Xukuumaddu muddo shan iyo toban 15 maalmood ku soo jawaabi weydo, waxaa loo qaadanayaa in ay aqbashay isbdalka.
Dawladdu waxay dhiirrigelinaysaa horumarin dhaqaale oo joogtaysan, waxayana kaashanaysaa dhaqaalaha gaarka loo leeyahay si kor loogu qaado wax soo saarka. Xeer ayaa xadaynaya hantida gaarka ah ee loola wareegi karo dan guud iyo habraaca loo marayo vastuurka.
Golaha Wakiillada wuxuu sameynayaa olole wargalin oo ku saabsan dib-u-habeynta, si loo xaqiijiyo in dadweynaha oo dhan ay xog-ogaal ugu noqdaan isbadalka lagu sameyanayo Dastuurka.
Ku wacyi galinta dadweynaha iyo masuuliyiinta dawladda muhimadda ay leedahay dastuurkw Xuquuqda Aadanaha ee ku cad Dastuurka iyo sharciyada Puntland, isla markaasna ku xusan Axdiyada iyo heshiisyada caalamiga dastuurkaa.
Duqa degmad iyo Ku-Xigeenkiisa lama xiri karo lamana baari karo jirkooda, deegaankooda iyo gaadiidkooda ay markaas wataan, haddii aan Golaha Deegaanku ogolaan codsi xasaanad ka qaadis ah oo uu soo gudbiyey Xafiiska Xeer-Ilaalinta Guud ama aan lagu qaban isagoo faraha dasturka jira fal-dambiyeed culus. Diinta Islaamku waa tan kaliya ee Dawladda Puntland ee Soomaaliya.
Haddii xubin ka mid ahi Goluhu ansaxin waayo, wuxuu Guddoomiyha Golaha Wakiillada u qorayaa in ciddii soo magacowday ay ku soo badasho mudoo shan iyo toban 15 beri gudahood. Madaxweynaha, Madaxweyne ku-xigeenka, xubnaha Golaha Wasiirrada iyo saraakiisha sarsare ee Dawladda ma geli karaan ganacsi gaar ah inta ay xilka hayaan. Himilada Dawladda Puntland waa taabbagelinta nidaam dawladeed oo ku dhisan wadatashi, dimoqaraadiyad, sinnaan iyo caddaalad bulsho oo waafaqsan Shareecada Islaamka, una horseedi karta dadkeeda nabad iyo xasillooni waarta iyo horumar dhinac walba ah oo ku jihaysan kor u qaadidda heerka nololeed ee dhammaan muwaadiniinta Puntland iyo ka qayb-qaadashada in himilooyinkaas ay gaaraan dhammaan dadka Soomaaliyeed.
Eedaysanaha laguma khasbi karo qirashada dembiga loo haysto. Golayaasha Deegaanka oo doorashadoodu ku beeganto furitaanka axsaabta ka hor waa la soo gaabin karaa ama la kordhin karaa muddada xilkooda. Muwaadinnimada Puntland waxaa difaacaya sharci gaar ah, waxaana qeexaya xeer gaar ah sida lagu heli karo ama lagu waayi karo jinsiyadda Puntland.
Garyaqaanka Guuud wuxuu talo sharci siiyaa Madaxtooyada iyo Golaha Wakiillada, markay uga baahdaan. Waa Hanti Gooni ah oo ha ku Xadgudbin.
Inay ka doodaan, dhaliilaan, waxna ku biirin karaan waxqabadka Xukuumadda. Qofka maxbuuska ahi waxa uu xaq u leeyahay daryeel caafimaad, cunto iyo waxbarasho. Qawaaniinta iyo dhaqanka bulshada waxaa saldhig u ah diinta Islaamka.
Xasaanaddu waxa ay leedahay heerar kala duwan. Goluhu waxa uu yeelan karaa la-taliyayaal iyo karraaniyaal isku dubbarrida doodaha iyo warbixinnada guddi-hoosaadyada.
La Dagaallanka musuqmaasuqa heer kasta oo maamulka Dawladda dhexdeeda ka jira. Guddoomiyayaasha Gobollada iyo ku xigeenadoodu waxay leeyihiin xasaanad xil, sidaa pyntland lama xiri karo lamana baari karo jirkooda, Degaankooda iyo gaadiidka ay markaas wataan, haddii aan Madaxweynuhu ogolaan codsi xasaanad ka qaadis oo uu soo gudbiyey Xafiiska Xeer-Ilaalinta Guud, ama aan lagu qaban iyagoo faraha kula dastuurks fal dambiyeed culus.
Degaan lagama samayn karo meel aan Dawladdu oggolaan. Aftida Wakiillo dadweyne in la puntlanc waxaa iyadoo sababeysan soo jeedinaya Golaha Xukuumadda, waxaana ogolaanaya Golaha Wakiillada. Madaxwynuhu wuxuu Xubnaha Xukuumaddiisa ka dhex xulan karaa Golaha Wakiillada iyo dibaddiisaba. Golaha Wakiilladu wuxuu kalsoonida kala noqon karaa wasiirada mid, ka badan ama dhammaantood.
Madaxweynuhu marka uu helo caddaynta Maxkamadda Dastuuriga ah, wuxuu soo saarayaa xeerka kala dirista Golaha.